स्कूल विभाग Archives - Lokpati.com
Tag - स्कूल विभाग
नेकपाकाे पार्टी स्कूलमा के-के पढाइँदैछ ?
काठमाडौं, २ असोज। नेकपाले असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय प्रशिक्षण (पार्टी स्कुल) चलाउने भएको छ। नेकपाले एकीकरणपछि पहिलो पटक सञ्चालन गर्न लागेको स्कूल विभागको प्रशिक्षण सम्मेलनमा कार्यकतालाई ‘सी चिनफिङ’ बारे प्रशिक्षण...
स्कुल विभागमा ईश्वर पोखरेलेको च्याप्टर क्लोज !
काठमाडौं। २०५६ को आम निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय फाँटमा रोचक घटना घट्यो। बिनाटेन्डर चाइना साउथवेस्ट विमान भाडामा ल्याइएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो। सुवास नेम्वाङ...
स्कूल विभागमा श्रेष्ठको दावी, पूर्वएमालेमै किन एक्लिए पोखरेल ?
काठमाडौँ। नेकपाभित्र वैचारिक नेतृत्व गर्ने विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवादमा सहमति जुटिसकेको छैन। उक्त विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी परेकाले आन्तरिक...
पूर्व माओवादीले स्कूल विभाग नछाड्ने
काठमाडौँ, ५ साउन। पार्टीको स्कुल विभागमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुबै समूहले अडान लिएपछि विवाद पेचिलो बन्ने देखिएको छ। विभागको नेतृत्वमा इश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको अडान रहेको छ।
सचिवालय बैठक अघि नेकपाका...